Barcelona Oo Bixisay Lacagtii Lagu Burburin Karayay Heshiiska Difaaca Kooxda Sevilla Ee Clément Lenglet Iyo Rajadii Man United Oo Soo Dhamaatay. – GOOL24.NET
Barcelona Oo Bixisay Lacagtii Lagu Burburin Karayay Heshiiska Difaaca Kooxda Sevilla Ee Clément Lenglet Iyo Rajadii Man United Oo Soo Dhamaatay.
Kooxda Barcelona ayaa ugu danbayn go’aan ku gaadhay in ay bixiso lacagta lagu burburin karo heshiiska difaaca ree France iyo kooxda Sevilla ee Clément Lenglet. Maamulka kooxda Barcelona ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay isku dayay in ay kooxda Sevilla kala xaajoodaan qiimaha lagu iibsan karo Clément Lenglet laakiin madax waynaha Sevilla ee Jose Castro ayaa go’aan meel adag iska taagay wax wada xaajood ah.
Kadib markii madax waynaha Sevilla ee Jose Castro uu si cad u sheegay in Barcelona ay bixiso lacagta lagu burburin karo heshiiska Clément Lenglet ama in uu kooxdiisa sii joogo doono ayay maamulka Barcelona diyaariyeen lacagta xidigan lagu iibsan karo waxayna geeyeen xafiiska maamulka horyaalka La Liga.
Sida ay wargaysada Spain ka soo baxa ee AS iyo Sport xaqiijiyeen, saraakiisha maamulka La Liga ayaa xidhiidh la sameeyay Sevilla waxayna ku war galiyeen in lacagtii lagu burburin karayay heshiiska Clément Lenglet oo ah 35 milyan euros ay xafiiskooda u taalo.
Waxaana warbixintan lagu sheegay in Clément Lenglet oo hadda qayb ka ah diyaar garowga kulamada xili ciyaareedka ka horeeya ee Sevilla uu heli doono oglaansho buuxa oo uu ugu bixi karo Camp Nou halkaas oo la filayo in caawa ama barri oo khamiis ah uu soo gaadhi doono.
Clément Lenglet ayaa mari doona tijaabada caafimaadka iyada oo waliba uu isla galabta Camp Nou soo gaadhay Athur Melo kaas oo isna barri oo khamiis ah saxaafada loo soo bandhigayo. Barcelona ayaa markii hore doonaysay in ay Sevilla kala xajooto iibka Clément Lenglet laakiin waxa lagu qasbay in ay bixiso lacag ka badan 35 milyan euros si wada xaajood loo sameeyo ama ay in lacagtan 35 milyan euroska ah bixiso.
In Barcelona ay bixisay lacagtii lagu burburin karayay heshiiskiisa Clément Lenglet ee kooxda Sevilla waxay soo gaba gabaysay rajadii ay Manchester United ka qabtay in 23 sano jirkan ree France ay Sevilla kala soo wareegto wuxuuna hadda Clément Lenglet garoonka Camp Nou kula midoobi doonaa xidigaha qarankiisa Samuel Umtiti iyo Ousmane Dembele.
Si kastaba ha ahaatee, daqiiqad kasta oo hadda ka bilaamaysa ilaa barri ayaa la filayaa in Clément Lenglet uu soo gaadhi doono kooxda Barcelona si uu tijaabada caafimaadka u maro iyada oo la sugayo in Barca ay heshiiskan si rasmi ah ugu dhawaaqdo.